Aragtida Calaamaddu waa furaha Suuqgeynta guuleysta | Martech Zone
Aragtida Calaamaddu waa Furaha Suuqgeynta Guusha
Jimco, Janaayo 1, 2021 Sabtida, Janaayo 2, 2021 Douglas Karr
Markii ugu horreysay ee aan booqdo Chicago waalidkay sanado kahor, waxaan booqashadii qasabka ahayd ku tagnay Sears Tower (oo hada loo yaqaan Willis Tower). Ku socoshada baloolaha dhismaha iyo kor u fiirsashada - waxaad bilaabeysaa inaad ka fikirto waxa layaabka leh ee injineernimada ay tahay. Waa 4.56 milyan oo dhudhun laba jibbaaran, 110 dabaq sare, waxay qaadatay 3 sano in la dhiso oo loo isticmaalo shubka ku filan si loo sameeyo waddo sideed-dheer ah, shan-mayl dheer.
Markaas waxaad fuulaysaa wiishka oo waxaad u kici doontaa 103 dabaq Skydeck. Halkaa marka ay marayso, 1453 cagood oo dhulka ka sarraysa, waad iska illowday dhismaha. Adoo fiirinaya Chicago, Harada Michigan, iyo jihooyinka ayaa kaa fogeynaya. Aragtida ayaa gebi ahaanba ka beddeleysa salka dhismaha ilaa dusha sare.
Waxaa jira dhibaato la xiriirta aragtida… waxay u egtahay inay nagu hagayso. Haddii aad had iyo jeer istaagto gunta 'Willis Tower', weligaa ma jeclaan doontid magaalada cajiibka ah ee aad taagan tahay. Waxaan u maleynaa inaan tan u sameyno sidii suuqleyda. Waxaan u muuqanaa inaan u dhigno shirkadeena ama alaabteeda ama adeegyadeeda udub dhexaadka nolosha macaamiisheena. Waxaan u maleyneynaa inaan nahay dhismaha ugu weyn adduunka. Waan weyn karnaa, laakiin magaalada - waxaad ka mid tahay kumanaan dhisme.
Mararka qaarkood macaamiisheennu waxay na weydiiyaan horumarinta shabakadaha bulshada ee gaarka loo leeyahay, macaamiisha. Aad ayey ula yaaban yihiin markaan u sheegno inaysan muhiimaddaas lahayn. Waxay u sheegaan kumanaan macaamiil ah oo ay leeyihiin, joogitaanka warshadaha, khubarada ay u hayaan shaqaalaha, tirada wicitaanada taleefannada ee ay helaan, tirada hits-ka ee degelladooda, yada, yada, yada. Waxay furaan shabakadda… cidna dan kama lihi. Cidina ma timaado. Hadda waa ego garaacis waana ay ka xishoodeen… marka waxay sameeyaan waxyaabo sida ku qasbaya macaamiisha inay u adeegsadaan shabakadda taageerada, si toos ah u galaan, kuna qasbaan maareeyayaasha mas'uulka ka ah inay buunbuuniyaan sida weyn ee shabakaddu u korayaan. Taah.
Hadday fahmi lahaayeen aragtida macaamiisha, weligood jidkaas ma mareen. Way ogaan lahaayeen inay qayb yar ka yihiin guud ahaan maalmaha shaqada ee macaamiisha. Waxaa laga yaabaa inay ku habboon yihiin daqiiqad 15 usbuucii hal mar oo macaamilku u qoondeeyay inuu isticmaalo alaabtooda. Haddii ay fahmi lahaayeen aragtida macmiilkooda, waxaa laga yaabaa inay ku riixaan inay ku ekaadaan waxqabad ayna ka jawaabaan baahiyaha macaamiishooda halkii ay maalgashi ku sameyn lahaayeen wax aysan macaamiishoodu u baahnayn ama rabin. Halkii ay ka sameyn lahaayeen shabakad bulsheed, laga yaabee inay horumarin lahaayeen tifaftire hagaagsan, qaybta su'aalaha la iska waydiiyo, ama ay soo bandhigaan fiidiyowyo dheeri ah oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo qalabkooda.
Aragtida kaliya maahan dhageysiga macaamiishaada, ee waa fahamka ganacsigaaga sida ay u arkaan:
Faham sida, goorta, iyo sababta ay kuu isticmaalayaan.
Fahmaan waxa ay adiga kaa jecel yihiin iyo waxa iyaga niyad jabinaya.
Fahmaan waxa u sahli lahaa noloshooda inay kula shaqeeyaan.
Faham sida aad ugu siin karto iyaga qiimo badan.
Markaad ogaatid taas, u adeegso habkaas suuqgeyntaada. Waxaa laga yaabaa inaad ka fiicnaan laheyd inaadan liis garayn 438 astaamood oo aad ku dartay daabacaadii ugu dambeysay - taas bedelkeedana waxaad qiraysaa inaad ogtahay in macaamiishaadu ay ku mashquulsan yihiin shaqo aad u muhiim ah… laakiin daqiiqadaha 15 ee ay kuu baahan yihiin, marwalba waad joogtaa .
Tags: Chicagojawaab celinta macaamiishaaragtida macaamiishadhagaystoaragtidamunaaraddii searsmunaaraddii
Maxay Yihiin Noocyada Shabakada (Madoow, Qoto dheer, Oog, & Cad)?
Mar 14, 2013 at 4: 58 AM
Gebi ahaanba waan kugu raacsanahay adiga Douglas! Ilaa aad ka ogaato macmiilkaaga iyo waxa doorka kaga jira noloshooda, ma horumarin kartid olole suuqgeyn guuleysta. Aragtida ay ka qabaan shirkaddaada ayaa muhiim u ah si loogu guuleysto suuq adag.
Mar 14, 2013 at 7: 34 AM
boostada heer sare ah (sidii caadiga ahayd), Doug!